Nin Muslimiin masaajid ku laayay oo dambigiisa qirtay - BBC News Somali
Image caption Warbaahinta gudaha ayaa isla dhexqaaday sawir ay ku sheegeen Alexandre Bissonnette
Nin reer Canada ah oo lagu eedeeyay in uu dilay lix ruux oo Muslimiin ah oo ku cibaadaysanayay masaajid ku yaalla Quebec sannadkii 2017kii ayaa qirtay dhamaan dacwadihii loo haystay, inkastoo uu markii hore diidanaa dambiyadaas.
"Wajigabax ayaan dareemayaa wixii aan sameeyay awgeed," ayuu ka yiri maxkamadda Quebec. "Argagixiso ma ihi, mana ihi nin Islaam nacayb biyo dhigtay".
Sylvain Faucher oo arrimaha maskaxda ku takhasusay ayaa Arbacadii maxkamadda u sheegay in uu la kulmay Bissonnette uuna rumaysan yahay in uu maskaxdiisa u badalay in uu murugo dareemay uuna doonayo in qoysaskii ay dadku ka dhinteen aysan "xannuun kale dareemin".
Dad masaajid ka soo baxay oo lagu xabbadeeyay Faransiiska
Image caption Aymen Derbali ayaa ka mid ahaa dadkii aadka ugu dhaawacmay wuxuuna noqday baaralays oo lugahiisa kuma istaagi karo